Madaxweynaha Sudan Cumar al-Bashiir oo ku dhawaaqay xukun degdeg ah - BBC News Somali
Madaxweyne Bashiir ayaa go'aanka kaga dhawaaqay qasriga madaxtooyada ee magaalada Khartuum
Mr Bashiir ayaa go'aankaasi waxa uu kaga dhawaaqay khudbad laga sii daayay taleefishinka oo qaranka ku socotay, hasayeeshee goor dambe ayaa waxa uu xubno ka tirsan ciidammada ammaanka waxa uu u magacaabay inay barasaabyo noqdaan.
Mar sii horraysay, Hay'adda Sirdoonka iyo Ammaanka Qaranka ee Sudan (NISS) ayaa waxa ay sheegtay in Mr Bashiir uu xilka ka degi doono.
Dibadbaxayaasha ayaa isugu soo baxay waddooyinka kaddib markii go'aankaasi loogaga dhawaaqay magaalada Umu Durmaan, qof goobjooge ah ayaa sidaasi sheegay, hasayeeshee waxaa durbadiiba booliska ayaa kaga hortagay sunta dadka kaga ilmaysiisa.
Shaqaale gargaar oo lagu afduubtay Koonfurta Sudan
"Waxaan guud ahaan dalka muddo sanad ah ku soo rogayaa xukun degdeg ah," ayuu yiri.
"Waxaan kala dirayaa xukuumadda heer federaal iyo sidoo kale barasaabyadii gobollada."